मध्यक्रम बलियो भएकाले ओपनिङको चुनौती लिन तयार छु – पारस खड्का – Janamukhi.com
मध्यक्रम बलियो भएकाले ओपनिङको चुनौती लिन तयार छु – पारस खड्का
जनमुखी संबाददाता ८ माघ २०७५, मंगलवार
माघ ०८, युएईसँगको तीन एकदिवसीय र तीन टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिज खेल्न नेपाली टोली आज त्यसतर्फ जाँदैछ ।१२ दिनको क्लोज क्याम्पपछि २० जना खेलाडीबाट अन्तिम टोलीमा परेका १६ जना युएई भ्रमणका लागि उत्साहित छन् । टोलीमा चार नयाँ खोलाडी पनि रहेकाले उनीहरुलाई परख्न पनि भ्रमण महत्वपूर्ण हुनेछ ।एकदिवसीय वरियतामा जान पनि युएई सिरिज महत्वपूर्ण भएकाले टिम राम्रो क्रिकेट खेल्नुपर्ने दबावमा छ । त्यही दबावलाई अवसर बनाउने र नेपाली क्रिकेटलाई अझै सम्बृद्ध गर्ने योजनामा छन् खेलाडी । युएई जानु एकदिन अघि हामीले नेपाली टिमका कप्तान पारस खड्कालाई भेटेर टिमको तयारी, योजना, ब्याटिङक्रम र समग्र क्रिकेटमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ ।
यसपटक तयारी कस्तो भयो ?
तयारी राम्रो भएको छ । नियमित क्रिकेट खेलिरहेका छौँ । पीपीएल, इपीएल पनि खेल्यौँ । हाम्रो दोस्रो एकदिवसीय सिरिज भएकाले उत्साहित छौँ । पहिलो एकदिवसीय सिरिज जित्न मौका छ । टी–ट्वान्टी पनि छ ।
१६ जना खेलाडी गइरहेका छौँ । चार जना नयाँ खेलाडी पनि छन् । हामी सबै सकारात्मक छौँ । राष्ट्रिय टिममा पनि प्रतिस्पर्धा बढीरहेको छ । त्यसले गर्दा हामीले राम्रो खेल देखाउन सक्ने आधार बढेको छ ।
अभ्यासलाई मैदानमा उतार्न केही समस्या त छैन ?
युएई राम्रो टिम हो, सजिलो भने हुँदैन नै । नेपाल र युएईबीचको तीन÷चार वर्षदेखिको खेल हेर्ने हो भने पनि हेड टु हेड उस्तै उस्तै छ । हामीसँग अब एकदिवसीय मान्यता भएकाले हरेक खेलको नतिजाले वरियतामा पनि फरक पार्छ ।
यसैले राम्रो खेल्न मेहनत गरेका छौँ । अभ्यास पनि राम्रो भएको छ, अब त्यसलाई खेलमा उतार्न बाँकी छ । हामी विश्वस्त रहेकाले अप्ठ्यारो हुँदैन । कति कुरा त मैदानमा गएपछि नै देखिन्छ ।
टिममा यसपटक सँगै चार जना नयाँ खेलाडी राखिएको छ । उनीहरु ठूलो मैदानमा दबाव झेल्न तयार छन् ?
धेरैजसो खेलाडी क्याम्पहरुमा त थिए । घरेलु क्रिकेटमा पनि हामी एकआपसमा खेलिरहेका हुन्छौँ । उनीहरु आफ्नो खेलकै आधारमा टिममा आएका छन् । हुन त अहिले टिममा आउने सबै जना खेल्छन् नै भन्ने पनि छैन । हामी अहिले अगाडिका लागि राम्रो गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ ।एकदिवसीय राष्ट्र भएपछि जतिसक्दो खेलाडी अगाडि ल्याएर दुई/तीन वर्षमा धेरै राम्रो टिम बनाएर बढ्नु पर्छ । उनीहरुको क्षमताको आधारमा नै स्थान बनेको छ । आश छ उनीहरुले मौका पाए भने आफू छानिनुको कारण प्रमाणित गर्ने छन् ।
बन्द प्रशिक्षणका क्रममा तपाईंले ओपनिङमा आएर पनि खेल्नुभएको थियो । सिरिजमा पनि ओपनिङ आउने तयारी गरिरहनु भएको हो ?
ए अँ, यसपटक सबैले यही सोधिरहनु भएको छ । त्यस्तै हुन सक्छ । यदि टिमको लागि जिम्मेवारी लिनु छ भने किन नगर्ने भन्ने हो । फेरि अब ओपनिङ गर्छु मात्र भनेर भएन, नतिजा पनि त्यही अनुसार दिनुपर्‍यो ।नतिजाका लागि त्यही अनुसारको खेल देखाउनु पनि प¥यो । प्रशिक्षकहरुसँग कुरापछि यदि मैले ओपनिङ गरेँ भने सक्दो उपयोग गर्ने हो । ओपनरले मात्रै रन हानेर जित्छ भन्ने पनि होइन, सिनियर खेलाडी भएका हिसाबले त्यो जिम्मेवारी ममा आइपर्छ भने चुनौती लिन तयार छु ।
ओपनिङमा हामीले को खेलाडी राख्ने भनेर प्रयास गरेको पनि लामो समय भयो । भनेजस्तो देखिएको छैन । त्यसैले आफैँ प्रयास गरौँ जस्तो लागेको हो ?
होइन होइन । मैले खेल जीवनमा लगभग मध्यक्रममा नै ब्याटिङ गरिरहेँ, चौथो नम्बरमा ८ वर्षजस्तो खेलेपछि डिभिजन टु देखि तेस्रो नम्बरमा खेलिरहेको हो । अब तेस्रो नम्बरबाट ओपनिङमा आएँ भने पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो ।अघि मैले भने जस्तै स्थान जुन भए पनि रन बनाउनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट त्यति सजिलो पनि छैन । ओपनिङमा रन लाग्ने, मध्यक्रममा नलाग्ने भन्ने हुँदैन । खेलाडीलाई टिम हेरेर दिइने स्थानमा उसले राम्रो गर्न सक्नुपर्छ । किनभने टिमले, प्रशिक्षकले कुनै क्षमता देखेर नै तपाईँलाई त्यो स्थानमा लैजान्छन् ।हामीसँग वास्तवमै नयाँ तयारी गर्ने समय पनि छ । यो वर्ष हामीसँग टी–ट्वान्टी विश्वकप छनोटका खेलहरु पनि आउँदै छन् । त्यसका लागि पनि अहिलेदेखि सोच बनाएर बढिरहेका छौँ । कुन अवस्थामा कुन खेलाडी कहाँ फिट हुन्छ त्यही नै गर्ने हो ।
गएको एभरेस्ट प्रिमियर लिगको एक खेलमा तपाईँ ओपनिङमा आउनुभएको थियो । आफैंले म यसमा गर्छु भन्ने सोचिरहनु भएको थियो हो ?
ओपनिङमा आउने इच्छा पहिले पनि थियो । पुबुदु दासानायके सर हुँदा पनि एकपटक ओपनिङ गर्ने कि भन्ने भएको थियो । तर, त्यतिबेला मध्यक्रममा नै जसोतसो सन्तुलन मिलाएर टिमलाई लैजानुपर्ने थियो ।अब अहिले मध्यक्रममा राम्रा खेलाडी आइसकेका छन् । उनीहरु त्यो जिम्मेवारी लिन सक्छन् । त्यसले गर्दा पनि मलाई ओपनिङमा गएर खेल्ने आत्मबल आएको हो कि जस्तो लाग्छ । मध्यक्रम बलियो नभएको भए सायद म ओपनिङ जाने सोच्दैन थिएँ ।विस्तारै मध्यक्रम बलियो बनेकाले ओपनिङमा पनि बलियो बनाउन सकियो भने पछाडिको ब्याटिङ पनि राम्रो हुन्छ । कि ठीक हुन्छ कि बेठिक हुन्छ । यही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त कहाँ छ र !
यो एउटा प्रयोग नै हो । के बेस्ट हुन्छ त्यही गर्छौँ ।
एउटै विषयमा धेरै कुरा गरेजस्तो भयो । तर, टिममा पारस खेल्न बाँकी नै छ भनेपछि दर्शकलाई मात्र होइन, खेलाडीहरुलाई पनि एक खालको अपेक्षा हुन्छ । तपाईँ नै ओपनिङमा आएर रन बनेन भने पछाडि आउने युवा खेलाडीलाई दबाव बढी हुन्छ कि ?होइन, समय बढ्दै जाँदा त्यही अनुसार चल्नुपर्छ । सबैले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । म सधैँभरि क्रिकेट खेल्दा पनि खेल्दिनँ । जबसम्म खेल्छु, आफ्नो तर्फबाट सक्ने मेहनत गर्छु । पारसले, ज्ञानेन्द्रले मात्रै रन हानेर टिमले जित्छ भन्ने छैन । त्यो होइन पनि, हरेक खेलाडीले आइपर्ने सबैखाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, लिएका पनि छन् ।एक जनाले राम्रो रन बनाए पनि अरु खेलाडीको १०÷१५ रनले ठूलो भूमिका खेल्छ । अब हामी अवस्था जे जस्तो भए पनि एकदिवसीय राष्ट्र भइसक्यौँ । नेपालभित्र नेपालबाहिर जता भए पनि आफ्नो स्तरमाथि उकास्ने प्रयास गर्नैपर्छ । ब्याटिङ मात्र गरेर खेल जितिने पनि होइन । यो स्तरमा बलिङ र फिल्डिङ पनि अझै राम्रो हुनैपर्छ । आशा गरौँ सबै कुरामा राम्रो गर्दै हामी अगाडि बढ्ने छौँ ।
हामी यसपटक पनि बलिङकै भरमा धेरै पर्नुपर्ने त होइन ?
हामीसँग ब्याटिङ कमजोर बलिङ बलियो भनेर जाने अवस्था छैन । हरेक कुरा सोच्नुपर्छ । टिमका रुपमा ब्याटिङ राम्रो नहुँदा बलिङले त्यसलाई कभर गर्ने र बलिङ नराम्रो हुँदा ब्याटिङले कभर गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, अब हामीले बलिङ राम्रो ब्याटिङ नराम्रो भन्ने बहसको अन्त्य गर्ने पर्छ ।ब्याटिङमा कुन बलमा कुन सट खेल्ने भन्ने सोच राम्रो बनेको देखिँदैन, बलको अवस्था भन्दा पहिले सटको तयारी गर्छन् भन्ने आरोप पनि लाग्छ, ब्याटिङ गर्दा ठीक समयमा ठीक निर्णय नभएको हो ?केही हदसम्म हो पनि । हामीले यो स्तरमा आएपछि सन्तुलनमा ध्यान दिनैपर्छ । कुन बेला के गर्ने भन्ने निर्णय लिन सक्नुपर्छ । लामो समय कसरी खेल्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । हाम्रो संरचना बलियो देखिँदैन ।अझ अघिल्लो पुस्ताका हामीले टेलिभिजनमा हेरेर कसरी खेल्ने भन्ने सिकेका हौँ । अहिले आएका नयाँ खेलाडी पनि राम्रो प्रशिक्षणको तयारीबाट आएका होइनन् । त्यसले जे जानेका थियौँ, त्यसमा नै लडेर यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । आगामि दिनमा राम्रो सिस्टम बन्छ भन्ने आश गरौँ ।खेलाडीले नियमित राम्रो क्रिकेट खेल्ने वातावरण बन्छ भने हामीले स्किल लेभलमा अझ काम गर्न सक्छौँ । ब्याटिङ गर्दा ब्याट्सम्यान आउट हुन एक बल नै त हो । त्यही एक बलमा राम्रो सोचिएन भने आउट भइहालियो । त्यसैले क्रिकेटमा ब्याटिङ अलि अप्ठ्यारो कला हो । हाम्रो समस्या जहिले ब्याटिङ नै भए पनि आफूलाई त्यसमा सहज बनाउनैपर्छ ।
टी–ट्वान्टी खेलहरु धेरै खेले पनि हामीले एकदिवसीयहरु खेल्न पाइरहेका हुँदैनौँ । त्यसले गर्दा ब्याटिङको तरिका त्यही फर्म्याट अनुसार मात्र गएको त होइन ?
होइन होइन, यसमा केही बाहना बनाउने ठाउँ नै छैन । अवस्था अनुसार ब्याटिङ गर्नैपर्छ । भविष्यमा टेस्ट खेल्ने कुरा गरिरहेका छौँ अनि ब्याटिङ टी–ट्वान्टीका लागि मात्र ठीक हुने ग¥यौँ भने पाइन्छ ?सबै फम्र्याटमा ब्याटिङ गर्ने क्षमता राख्नैपर्छ । एउटै सिरिजमा एउटै खेलाडीले टी–ट्वान्टी, एकदिवसीय र टेस्ट खेल्नुपर्छ । खेलाडीका रुपमा सोच्दा त्यो दिनको त्यो खेलमा के आवश्यकता छ गर्ने त्यही नै हो । आफ्नो स्किललाई म्यानेज गर्नैपर्छ ।
हामीले एकदिवसीय र टी–ट्वान्टीमा ब्याटिङ क्रम परिवर्तन गर्ने र केही खेलाडी परिवर्तन गर्ने सोचेको हो ?
पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ । केही खेलाडी विशेष त्यसैका लागि छन् । हामीसँग भएका केही खेलाडी टी–ट्वान्टीका लागि मात्र खेल्न सक्छन्, केही एकदिवसीयका लागि मात्रै पनि खेल्न सक्छन् । सबै खेलाडीले आफूले आफूलाई प्रमाणित गर्दै आएका छन् । पाएको अवसरमा राम्रो गर्ने छन् भन्ने आश गरौँ ।
पहिलो एकदिवसीयका लागि नेदरल्याण्ड्स गएपछि दोस्रो एकदिवसीयबीचको समय धेरै भयो जस्तो लाग्दैन ?
के गर्नु यस्तै छ । हाम्रो संरचना नहुँदा भनेजस्तो गर्न पाएका छैनौँ । आईसीसीमा भनिरहेका त हौँ, भन्न यो युएई सिरिज आइपुग्यो । केही भर नै छैन । जे पाएका छौँ, त्यसलाई अवसर बनाएर अगाडि बढ्ने नै हो ।
पहिलो एकदिवसीय भ्रमणपछि अहिले दोस्रोमा आइपुग्दा हामीले केही नयाँ कुरा सिक्यौँ ? खेलाडी आफैँले कुनै नयाँ स्किल या केही सुधार ?
हेर्नुस् अब नयाँ आइडिया, स्किल भन्दा पनि हामीले गर्न बाँकी भनेको सिकेको कुराको राम्रो प्रयोग नै हो । हामीले गएको चार/पाँच महिनामा राम्रो क्रिकेट खेल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । व्यक्तिगत रुपमा पनि खेलाडीहरुले आफूमा सुधार गरिरहेका छन् ।यही कुरा भनेर नभए पनि आफ्नो कमजोरीमा सुधार सबैले गरेका छन् । त्यसमा नियमित काम भएको छ । घरेलु प्रतियोगिता नै भए पनि नियमित क्रिकेट खेलिरहेकाले सहज पनि भएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय खेल अलि फरक हुने भए पनि हामीले त्यसमा सोच्नै पर्छ । देशको लागि भनेर खेलेपछि अलिकति दबाव पनि बढ्छ । त्यसले गर्दा जिम्मेवारी पनि थपिन्छ । हरेक चुनौतीलाई हामीले अवसर बनाउनै पर्छ ।
हामीले युएई टिमलाई अहिले कत्तिको याद गरिरहेका छौँ ? उनीहरुको बलियो र कमजोर पक्ष बुझेका छौँ ?
उनीहरु धेरै राम्रो टिम छन् । उनीहरुको तीन जना सिनियर खेलाडी प्रतिबन्धमा छन् तर, सबै खेलाडी नियमित क्रिकेट खेल्ने नै छन् । युएईमा क्रिकेट डेब्यु गर्नेहरु पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका कतै न कतै क्रिकेटमा नै लागिरहेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुसँग अनुभव धेरै हुन्छ । प्राय त हामीसँग पनि खेलेकै खेलाडी छन् । प्रतिस्पर्धा निकै बलियो हुने छ जस्तो लाग्छ ।
नेपालकै मैदानमा हामीले कहिले सिरिज हेर्न पाइएला त ?
यो अहिलेसम्मका लागि आईसीसीमै भर पर्ने कुरा हो । भयो भने खबर भइहाल्ला । अहिलेसम्म त हामीले भनिरहे पनि खबर केही आएको छैन ।हाम्रो लागि जतिसक्दो राम्रो गरेर वरियतामा राम्रो गर्ने मौका पनि हो । हामीले अब खेल्ने भनेको यस्तै सिरिजहरु नै हो । त्यसले नै हाम्रो लागि हरेक खेल महत्वपूर्ण हुन्छ । नतिजा रेकर्डमा जाने भएर त्यसमा राम्रो गर्नुपर्छ । टेस्ट राष्ट्रसँग सिरिज खेल्नेसम्म पुग्न हामीले हरेक खेल राम्रो गर्ने सोच्नुपर्छ ।
अरु योजना कस्ता छन् ?
हाम्रा लागि अर्को विश्वकप छनोटसम्मको समय निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसले अर्को भविष्य देखाउँछ, त्यसैले त्यहाँसम्म हामी राम्ररी पुग्नुपर्छ ।आश गरौँ, हाम्रो तयारी त्यहाँ पुग्न पर्याप्त हुने छ । यो वर्ष टी–ट्वान्टी विश्वकपमा फोकस गरेर बढौँ । त्यसपछि आएका हरेक खेलमा राम्रो गर्नुपर्छ । विश्वकपमा जाने हाम्रो सपना पनि छ, इच्छा पनि छ ।
(साभार:- अन्लाइन खबर)
बुवाको उपचार र परिवारको खर्च जुटाउन सफारी चलाउदै १७ बर्षिया किशोरी
नेपाल–भारत सिमानामा विप्लव निकटको अखिल क्रान्तिकारीद्वारा काँडेतार लगाइयो